Puntland Oo Qiratay In Xildhibaan Ka Tirsan Uu Gacanta u Galay Somaliland – Goobjoog News
Puntland Oo Qiratay In Xildhibaan Ka Tirsan Uu Gacanta u Galay Somaliland
Xildhibaan Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobo oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa Goobjoog News u xaqiijiyay inuu jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaankooda oo gacanta u galay maamulka Somaliland.
Xildhibaanka oo ka qeybgalay kulan looga hadlayay ammaanka gobolka Sool ee dagaalku uu ku dhaxmaray ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Somaliland oo lagu qabtay magaalada Garoowe.
Inta uu socday kulankan ayaa xubnahii ka qayb galay waxa ay ku soo bandhigeen qaabka ciidamada Somaliland gacanta ay ugu dhigeen xildhibaan ka tirsan Barlamaanka Maamulkaas.
Xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo ayaa xaqiijiyay in uu jiro xildhibaan Puntland ah oo gacanta u galay Somaliland:”Xildhibaanku nin dagaalka ku jiray muu ahayn, meeshii laga soo dooran jiray ayaana lagu qabtay, isagoo waddo maraya ayuunbay qabteen, waana jiraa”, waana sida uu hadalka u dhigay.
Xildhibaankan ay Somaliland gacanta ku dhigtay ayaa lagu magacaabaa Xildhibaan Maxamed Faarax Aadan Canjeex, kaas oo illaa hadda ku jira gacanta maamulka Somaliland.
Maalintii shalay ayaa waxaa dhacay dagaal u dhexeeya Somaliland iyo Puntland deegaanka Dhahar ee gobolka Sool, kaas oo ay ka dhalatay dhimasho, dhaawac, barakac, maxaabiisna lagu kala qabsaday, iyadoo illaa hadda la isku hor fadhiyo deegaanadii lagu dagaalamayay.
Muuqaal: Wabiga Shabelle Oo Laga Baqayo Inuu Ku Fataho Magaalada Jowhar
Ciidamada huwanta iyo Al-shabab oo xalay ku dagaalamay Buulo-mareer
Lwmpgx fekzdl Real cialis without prescription generic cialis cost
Vqnyyz xphzfx Viagra cialis india
Wavmlv ijyfaa Order viagra cialis over the counter
Mzlzow xbcgky canadian online pharmacy rx pharmacy
Vtdjyy nyhzwu canada pharmacy Xtqtp...
Qhnxhv tpuzkp canada pharmacy Ikwfg...
Otfavq rhmpgn canadian pharmacy online Kkxtr...